18/01/2018 - 16:45 : HOUCINE ARFA: Mangataka ny hihaona amin’ny filoha frantsay Emanuel Macron i Houcine Arfa.
18/01/2018 - 16:30 : SENDIKAN’NY MPANDRAHARAN’NY FONJA: Ny fonjan’ny tsiafahy dia tsy fitazonana olona mbola tsy vohatsara hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja.
18/01/2018 - 16:15 : FANAPAHANA KARAMA: Tokony ny ao amin’ny ministeran’ny vola no hanao fanadiovana voalohany izay vao midina makany amin’ireo mpiasa madinika, ary misy ny lalana tokony arahina fa tsy tapahana fahatany fotsiny hoy Faniry Erinaivo filohan’ny SMM.
18/01/2018 - 16:00 : MALAIMBANDY: Jiolahy mpaka an-keriny 2 no voasambotry ny zandary rehefa nisy ny fifampitifirana omaly maraina.
18/01/2018 - 15:45 : MASOIVOHON’NY FANJAKANA BRITANIKA: Nanatanteraka fitsidihina tamin’ny fomba fifanajana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny androany ny Masoivohon’ny Fanjakana Britanika ny Son Excellence Philip BOYLE.
18/01/2018 - 15:30 : VIDIM-BARY: Nahitana fihenany ny vidim-bary eny an-tsena ary efa hita miparitaka eny koa ireo vary avy eto an-toerana.
18/01/2018 - 15:15 : BAOLINA LAVALAVA: Vita tsy nisy tomika ny fandaharan-dalao rehetra tamin’iny taona 2017 iny ary miandry ny fankatoavan’ny ministera mpiahy ny fanaovana fifidianana ho filohan’ny ligy hoy ny filohan’ny ligin’Analamanga.
18/01/2018 - 15:00 : ANKAZOBE: Nisy ny fifampitifirana teo amin’ny dahalo sy ny Zandary tany Antampoketsa ny talata lasa teo , ka dahalo 1 no voasambotra. Ireto dahalo ireto dia nangalatra omby miisa 20, izay mbola mitohy ny fanarahan-dia.
18/01/2018 - 14:45 : RAHARAHA HOUCINE ARFA: Raha tena madio ny minisitra dia tokony sahy hametra-pialana mba tsy hisian’ny fitongilanana eo amin’ny fanadihadiana hoy ny filohan’ny SMM Faniry Erinaivo.
18/01/2018 - 14:30 : MALAIMBANDY: Jiolahy mpaka an-keriny 2 no voasambotry ny zandary rehefa nisy ny fifampitifirana omaly maraina.
Archive du 20171024
Aretina Pesta Misahotaka ny fanjakana
107 ny isa ofisialy momba ireo matin’ny pesta nanomboka ny 1 aogositra 2017 hatramin’izao, ka ny 47 tany amin’ny hopitaly, ary 61 maty teny anivon’ny fiarahamonina.
Governemanta Mbola hisy fanovàna indray ?
Re izao fa mbola hisy ihany ny fanovana mpikambana ao amin’ny governemanta mialoha ny faran’ny taona, izany hoe misy ny minisitra mbola hoesorina na hafindra toerana.
Rivo Rakotovao Mametrapetraka ny 2018
Na dia fifamindram-pahefana teo amin’ny tenany sy ny minisitry ny fambolena sy fiompiana vaovao, Harisson Edmond Randriarimanana, aza no notontosaina tetsy amin’ny minisitera misahana izany tetsy Anosy omaly dia tsy nanakana ny minisitra teo aloha,
Niova seza indray Rabeko…
Manao ahoana izy ao ry Jean Rabekonetaka a ! Arahabaina aloha fa nahazo toeram-boninahitra vaovao indray e !
Mahery Lanto Manandafy Hotsaraina amin’ny 14 novambra
Tsy tapitra hatreo fa mitohy ny gidragidra eo amin’i Mahery Lanto Manandafy sy Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Andriatongarivo vadiny.
Hajo Andrianainarivelo Feno fitavozavozana ny fanjakana
Tsy voafehy ny aretina pesta satria tsy misy fandraisana andraikitra hentitra, feno fitavozavozana ary misavoritaka ny fomba fiasan’ny fanjakana manoloana ny fifehezana izany,
Penjy Randrianarisoa Mitohy ny fanamboaran-dalana eny Ivato
Lalana mirefy 1 km no hamboarina hatao rarivato ao amin’ny kartie K7 eny amin’ny kaominina Ivato, Distrika Ambohidratrimo.
Fiahiana ara-tsosialy-Faritra Anosy Nojerena manokana ny kaominina
Tao anatin’ny roa andro no nanatanterahana ny atrikasa fampiofanana an’ireo ben’ny tanàna sy ireo filohan’ny filankevitra kaominaly ary ny mpikirakira vola eo anivon’ny kaominina ato anatin’ny faritra Anôsy.
Mpandraharaha manafim-bary Nampitandremana fotsiny aloha
Nampahatsiahy ny fomba fiasan’ny minisitry ny varotra sy fanjifana ankehitriny, Chabani Nourdine,
Mondial 2018 andiany faha-21 any Rosia 23 amin’ireo firenena 32 no efa fantatra
Firenena 23 amin’ireo 32 maneran-tany handray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny baolina kitra hotontosaina any amin’ny kianja 12 any Rosia ny 14 jona – 15 jolay amin’ny taona 2018 no efa fantatra anarana ankehitriny :
Basikety - Tompondakan’i Afrika Fiba 3 x 3 Amin’ny alakamisy izao no ho fantatra ny Malagasy 4
Amin’ny alakamisy 26 oktobra 2017 no ho fantatra ireo mpilalao 4 hisolotena antsika Malagasy hiatrika ny ho tompondakan’i Afrika andiany voalohany eo amin’ny taranja basikety na ny Fiba 3 x 3 hotontosaina any Lomé Togo ny 3 ka hatramin’ny 5 novambra ho avy izao.
Edito Ho mason-tsoavaly izany
Mijery aloha isika, hoy ny loholona vaovao, raha nandray fitenenana nandritry ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra vaovao tao amin’ny minisitera nosahaniny teo aloha omaly.
Sarah Rabearisoa “Miala rehefa tsy mahavita azy ny minisitry ny fahasalamana”
Raha otratr’izao foana ny fomba fiasan’ny governemanta, dia mety izahay ao amin’ny PLD (Parti Liberal Democrate) mihitsy no hitantana ny vahoaka hametraka ny fangataham-pialan’io governemanta io,
Andriambavy Anne Elisabeth Mandalo eto amintsika, hitsidika ny BMH Isotry
Mandalo eto amintsika nanomboka omaly alatsinainy 23 oktobra ny Andriambavy Anne Elizabeth Alice Louise sy ny vady andefimandriny, ny Vice-amiral Timothy Lawrence.
Anosibe sy ny manodidina Hodiovina mandritra ny roa andro indray
Na dia tsy mbola nahitana ny trangan’aretina pesta aza teny amin’ny tsenan’Anosibe, hoy Ramarosandy Landry lehiben’ny tsena ao an-toerana dia hotanterahina manomboka anio indray ny asa fanadiovana faobe eny an-toerana sy ny manodidina.
Tsy mivaha ny olan’ny LRN Ambatondrazaka Nidina an-dalambe ny mpianatra
Miitatra toy ny sima misioka ny olana ao amin’ny Lisea Ranohavimanana Norbert (LRN) ao Ambatondrazaka. Taorian’ny mpampianatra izay tsy nankasitra ny fanovana ny Proviseur ao amin’ity lisea ity,
Sekoly tsy miankina Miandry izay fanapahan-kevitry ny minisitera hatrany
Tsy hiova amin’ny baikon’ny minisiteran’ny fanabeazana azony ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina eto amintsika na dia nandray fanapahan-kevitra aza ny sekoly katolika fa hiverina hianatra avokoa rahampitso alarobia.